नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, १९ असार २०७६)
कम्पनीले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस शेयर र शून्य दशलमव ६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको असार १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । बीमा समितिबाट स्वीकृत भएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीले उक्त लाभांश पाउनेछन् । बुधवार कम्पनीले बोनस शेयर प्रस्ताव गरेपछि शेयरमूल्य १४ अंक बढेर रू. ४९३ पुगेको छ । सो दिन कम्पनीको ९ हजार ७९१ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब १७ करोड ६२ लाख छ । १२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपछि पूँजी रू. १ अर्ब ३१ करोड पुग्नेछ । कम्पनीले चालू आवको ९ महीनामा रू. २५ करोड १५ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १९ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. २१ करोड ३ लाख नाफा कमाएको थियो । चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. १ अर्ब ४१ करोड बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशत बढी हो ।
2019-07-04 - 73 view(s) - abhiyan